Ciidamo Katirsan DF-ka Oo Dhimasho iyo Dhaawac Ku Noqay Qarax Ka Dhacay Degmada Kaaraan.
Friday August 04, 2017 - 14:44:17 in Wararka by Super Admin
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay qarax xooggan oo ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya lagula beegsaday Bariga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Wararka ka imaanaya xaafadda Siisii ee degmada Kaaraan ayaa sheegaya in tobaneeyo askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qarax lagula beegsaday isku imaatin ay ciidamadu xilligaasi ku sugnaayeen.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhashay Miino dhulka lagu aasay lala helay isku imaatin ay ciidamadu xilligaasi ku cunayeen Maandooriyaha khaatka, warar hordhac ah waxay sheegayaan in dhimashada ciidanka gaartay ay ka badan tahay 5 Askari iyo dhaawaca tobaneeyo kale.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda qaraxa sida ay baahisay Idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka xarakada, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin DF-ka oo ku aaddan qaraxa ka dhacay xaafadda Siisii ee degmada Kaaraan.
Qaraxyada iyo dilalka ayaa wali kasii socda degmooyinka gobolka Banaadir waxaana fashil qarka usaaran howlgalkii loogu magac daray xasilinta Caasimadda ah ee ay ku dhawaaqday xukuumadda uu madaxda ka yahay Xasan Cali Kheyre.